Uyivula njani ikhonkco kwithebhu entsha kwi-Safari | Ndisuka mac
Le "yingcebiso" elula enokuba nomdla kubo bonke abo bangayekiyo ukungena kwiwebhu kwaye abafuni kuphoswa nayiphina into abayindwendwelayo. Ngokucacileyo eli qhinga lincinci alikho ntsha kwaye kunokwenzeka ukuba uninzi lwabo bakhoyo sele belazi. Imalunga ne vula ikhonkco ngokuthe ngqo kwithebhu entsha ngaphandle kokuvala iwebhu okanye indawo esiyindwendwelayo okanye utshintshe akukho xesha. Ngale nto, esikufezekisayo yenye indawo yokuvelisa imveliso kuba i-tab evulekileyo iya kuhlala ukuze siyityelele kamva kwaye sifunde umxholo wayo.
Ukufezekisa oku kulula njenge cofa iqhosha le-cmd kwaye ucofe ikhonkco okanye umxholo weendaba esifuna ukuvula kwithebhu entsha. Ngokucinezela ngaxeshanye into esiza kuyiphumeza kukuvula ithebhu entsha kunye neendaba kwaye siya kuba nakho ukufunda umxholo wayo kamva. Enye inkcukacha enomdla yale ngcebiso kukuba ivumela umsebenzisi ukuba aqhubeke kwiphepha elinye lokukhangela kwi-web ngaphandle kwengxaki, i-tab iya kuvulwa kwi-Safari kwaye sinokufikelela kuloo mxholo nanini na sifuna.
Oku kulungile kwabo bafunda okuninzi kwi-intanethi okanye bakhangele iisayithi ezininzi ngaxeshanye kunye neethebhu ezininzi ezivulekileyo kwisikhangeli, kuba ukuba bafuna ukuba ne-tab ekhethekileyo eneendaba okanye ulwazi lwelo khonkco ngexesha, angenza njalo ngaphandle kwengxaki. Ngale ndlela kwaye ngezi "ngcebiso" zilula kodwa zisebenzayo njengakule meko, sinako ube nemveliso ngakumbi kunye nesikhangeli seSafari kunye neMac yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyivula njani ikhonkco kwithebhu entsha kwi-Safari
Le yimeko yeCodex yeMacBook yendlu yaseMoshi